Pharyngitis mgbaàmà | Bezzia
Ọrịa nke pharyngitis
Tony Torres | 09/06/2021 23:55 | Ọrịa
Pharyngitis, akpịrị mgbu, ma ọ bụ tonsillitis? Ọbụlagodi na a na-ejikarị okwu ndị a eme ihe aghara aghara Iji kwupụta otu ihe, eziokwu bụ na ndị a bụ nsogbu dị iche iche. Akpịrị nwere ike imerụ ahụ n'ihi nje, nke na-ebute mbufụt gburugburu tonsils, mana ọ bụghị ụkọ n'onwe ha. Mgbe nke a mere, ọ bụ kpọmkwem tonsillitis nke enwere ike ibute site na ebumnuche dị iche iche.
Ma mgbe enwere pharyngitis, ihe na - eme bụ na pharynx na - agbanye ọkụ. Ọrịa a na-eme n'ihi nje na-efe efe. Ọrịa a na-ebute oke mbufụt na tonsils, yana mpaghara akpịrị niile. Pharyngitis na-esonyere mgbu, ahụ ọkụ, nsogbu isi ike, na ahụ erughị ala nke na-ewekarị otu izu.
1 Gịnị bụ ihe mgbaàmà nke pharyngitis
1.1 Ọgwụgwọ maka pharyngitis
1.2 Gbochie pharyngitis
Gịnị bụ ihe mgbaàmà nke pharyngitis
N'ịbụ nke nwere akpịrị akpịrị incipient, ọ dị ezigbo mkpa ịme usoro mgbochi iji zere nsonaazụ ka ukwuu. Agbanyeghị, mgbe ọrịa nje butere, ọ na-esiri ike igbochi ihe mgbaàmà ịpụta na nke ọ bụla. Iji chọpụta pharyngitis nwere ike, ọ kachasị mma ịga ụlọ ọrụ dọkịta ka na mgbakwunye na nchoputa, enye a N'ezie nke ọgwụ nje mee ihe na-ekpochapụ ọrịa.
Ndị a bụ ihe mgbaàmà nke pharyngitis nke ahụ nwere ike inyere gị aka ịkọwa ọdịiche nke akpịrị nke oge ụfọdụ site na ọrịa nke chọrọ ọgwụgwọ ọgwụ.
Akpịrị mgbu: Na akpịrị mgbu ọ bụ ihe bụ isi na pụtara ìhè nziputa nke pharyngitis. You nwere ike ịchọpụta apnrụgide dị n'olu gị, na etiti ebe gburugburu tonsils.
Fụrụ akpụ tonsils: Mgbe mbufụt nke pharynx emee, tonsils nwere ike emetụta ma bụrụ nnukwu ọkụ. Kedu na-egbochi ilo nke ọma, na-emepụta ihe mgbu siri ike ọbụna na ngosipụta dị mfe nke ilo ọnụ.
Ahụhụ: Ọrịa ahụ nwere ike ibute ahụ ọkụ, yana ọrịa izugbe, mgbu na adịghị ike. Mgbaàmà ndị a dị nnọọ ka nke flu.
Ọrịa lymph zara na olu ya: A na-ahụ ọnya lymph n'olu n'olu dị ala, na-agbakwunye na olu na pharynx. Ọ bụrụ na ọrịa ahụ dị mkpa, ọnụ nwere ike ịza aza na bụrụ ihe anya na-ahụ n'anya.
Ọgwụgwọ maka pharyngitis
Zọ dị mma iji gwọọ pharyngitis bụ ịga leta dọkịta gị. Ọ dị mkpa na ọkachamara ahụ nyochaa ihe kpatara pharyngitis, yana oke ike ya, iji nye iwu ọgwụgwọ kwesịrị ekwesị. N'ihi na ihe ize ndụ nke ịgwọghị nsogbu a n'ụzọ ziri ezi nwere ike ibute ọrịa pharyngitis na-adịghị ala ala. Ọgwụgwọ nwere ike ịgafe oriri nke ọgwụ mgbochi mmiri kpọmkwem, yana ihe na-egbu mgbu.
Nnukwu oriri mmiri dị ezigbo mkpa, n'ihi na ahụ ọkụ nwere ike ibute akpịrị ịkpọ nkụ. Na mgbakwunye, ekwesiri ịgbakwunye na ihe isi ike ilo ihe na - akpata ụbọchị ole na ole ị nwere ike iri nri siri ike ọ bụla. Ya mere, na oriri nke mmiri mmiri na-ekpo ọkụ, ezigbo broths, ihe ọthsụ naturalụ ndị sitere n'okike jupụtara na vitamin na n'ezie, ọtụtụ mmiri.
Ezumike bụ akụkụ dị mkpa nke mgbake, dị ka nke a, usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ nwere ike iwusi ike mgbe ị na-alụso ọrịa ọgụ. I nwekwara ike inyere akpịrị gị aka ịgwọ site na ịmị mmiri na soda. Gbalịa izu ike dị ka o kwere mee, ekwula okwu iji zere iwe iwe karịa ma kwe ka ọ gbakee kpamkpam tupu ịlaghachi n'ọrụ gị.
Receivinggaghị enweta ọgwụgwọ kwesịrị ekwesị na nke ọ bụla, nwere ike ime ka pharyngitis na-eduga na isi nsogbu dị ka ọrịa ntị ma ọ bụ sinusitis. Ya mere, ọ dị mkpa ịgbaso ndụmọdụ ndị ọkachamara nyere gbasara ọgwụgwọ. Na mgbakwunye na ịme ihe mgbochi dị mkpa, nke gụnyere ịdị ọcha aka, izere ihe ọ drinksụ coldụ oyi ma ọ bụ ichebe olu na gburugburu oke oke.
N'ọtụtụ oge, enwere ike izere ọrịa akpịrị, na-eme ihe ụfọdụ dị mkpa. Nọpụ iche nye ndị na-egosi mgbaàmà nke pharyngitis dị mkpa, ya mere, ọ bụrụ na ị nwere ụmụaka n'ụlọ, ị kwesịrị ị hụ na ha anaghị abịaru nso iji zere ha. Iji nkpuchi, tinyere ịdị ọcha aka ga-enyere gị aka ichebe ezinụlọ gị megide nje a na nje ndị ọzọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » Ahụike » Ọrịa » Ọrịa nke pharyngitis
Esi ewepu tomato stains
Pingnagide nsonaazụ nke mmekọrịta na-egbu egbu